Sidee garaam ama shaah oo ah Kratom budada badan oo ah in la Qaado?
Posted by Lyndon deed	 25 Comments
Intee in le'eg oo Kratom waa in aad qaadato si aad u gaarto natiijada la doonayo? Haddii aad xiisaynayso isticmaalaya Kratom for saamaynta anti-walaaca, si loo kordhiyo heerka tamarta aad, ee ka bixitaanka opiat ama in kor dareenka rayn, qiyaasta leedahay mudnaan muhim ah. Inta ay garaam aad u baahan tahay in ay isticmaalaan ku xirnaan doonaa arrimo shakhsi ah sida heerka dulqaad iyo habka isticmaalka aad. Waxa kale oo ay ku xirnaan doontaa in aad gool tan iyo markii uu Budo Kratom uu raad aad u kala duwan ku xiran tahay lacagta aad qaadato. Maqaalkani waxa uu eegi doonaan sida badan oo garaam oo ah budada Kratom waa fiican oo amaan ah si ay u isticmaalaan.
Sidee garaam badan oo ka Kratom in la Qaado?
Dhalatada Kratom The kartaa fal xoojinayo ama sida kabuubiso ku xiran qiyaasta aad isticmaasho. Haddii aad ku eekaan qaadasho oo yar, waxaad filan kartaa in ay dareemaan si xowli ah ee tamarta, focus, dhiirogelin iyo in la caddeeyo in maskaxda waa weyn ka tarto aad wax soo saarka. Haddii aad la kordhiyo qiyaasta, waxaa halkii dhigi doonaa inaad dareentid dabacsan, qabooji kasta fikradaha walaaca, waxaad ka dhigi lahaa niyad wanaagsan, waxaad samayn boogeed dareenka xanuunka oo kaa caawinaya bixitaanka opiat inuu ka tago daroogada la qabatimo. Tirada garaam aad maalin kasta qaadatid inta badan ku xirnaan doontaa taas oo spectrum of saamaynta aad xiiseynaysid in aad la kulanto.
Noocyada ugu badan oo ah budada Kratom, dose marinka noqon doonaa 2 garaam ama ka badan. Taas macnaheedu waa in haddii aad qaadato in ka yar caddadka this, aad tahay lagama yaabo inay wax la kulmaan. Tani had iyo jeer waa meesha ugu fiican ee loogu talagalay dadka cusub in ay si bilaabaan in ay xukumi karaa sida geedo yaryar oo iyaga saameeyaa. In kasta oo dhif, dadka qaar ka dareemi kartaa lalabo, wareer ama qaadid madax- ka dib markii waxyaabaha Kratom markii ugu horeysay.
Marka aad si raaxo leh saamaynta warshad this, waxaad kordhin kartaa tirada garaam aad qaadato. Tani waxay ugu dambeyntii ku xirnaan doontaa xoogga oo ah budada ee aad isticmaalayso sida nooc cusub sida Maeng Da ama Vietnam u baahan doonaan ka yar. Waxaan leenahay dhamaystiran more Tixraac qiyaasta Kratom in aad halkaan ka akhrisan kartaa, laakiin ujeedooyin ee hagahan waxaan u qaadan doonaa in aad isticmaalayso ku xoog-dhexdhexaad Red Bali ama Budo Thai Red.
Maxaa Inta aad Isticmaal Tamarta iyo Focus waa in? Tirada taliyay garaam in ay qaataan for saamaynta waa inta u dhaxaysa 3 - 6 g maalintii. Natiijooyinka duwanaan doonaan shaqsi shaqsi si waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay in aad tijaabiso yara helo qiyaasta ugu fiican ee aad u. Si aad u saamaynta Kratom xoog, qaso budo la potentiators sida juice bambeelmo.
Intee in le'eg oo Kratom in ay qaataan ee Walaaca iyo Xanuun? Haddii aad ka cabanayso Anxiety Disorder General ama Walaaca Social, qiyaas ah oo u dhexeeya 7 - 9 garaam waa caadi ah in la isticmaalo. Had iyo jeer bilaaban doono dhamaadka hoose ee kala duwan tan iyo weligaa ha isticmaalin in ka badan waxaad u baahan tahay inaad. Shakhsiyaadka isticmaalaaya Kratom sida duwan oo dabiici ah in daawooyinka xanuunka sidoo kale arki doona natiijooyin wax ku ool ah ee kala duwan this. Dhamaadkii sare, Kratom noqon kartaa mid aad u sedating oo waxaa laga yaabaa in aad hurdo la dhaco ugu dhakhsaha badan ka dib waxaa la isticmaalayo.
Afeef: Macluumaadka lagu soo bandhigay website-this Looguma tala gelin inay bedesho talo caafimaad xirfadeed. Tani waa fikrad ku salaysan waayo-aragnimada qof ahaaneed iyo cilmi-. Haddii aad ku jirto habka joojinta sigaarka daroogada opiat sida la soctaa, Heroin, Morphine, Suboxone ama dadka kale, waa inaad la hadashaa dhakhtarkaaga koowaad si aad uga hesho talo. Tallaabo kasta oo qabtay oo ku salaysan ee macluumaadka ku jira boggan yahay ee ay kuu gaar.
Sidee badan oo garaam oo Kratom waa in aad qaadato ee ka bixitaanka opiat? Ka dib markii joojintiisa daroogada opiat, Ilo online soo jeedinaya in aad isticmaasho 7 - 9 garaam oo ah budada Kratom in ay yareyso astaamaha u-barashada. Kacmaha guud ahaan waa la soo noqnoqda oo u dhexeeya 2-4 jeer maalintii muddo seddex maalmood. Oo maalintii afraadna, markaa waa in aad si tartiib ah u bilaabi yareeyo qiyaasta by laba garaam maamul 5 - 7 garaam. Ka dib markii maalintii shanaad waa in aad isticmaasho inta u dhaxaysa 3 - 5 garaam oo maalintii lix isticmaalka kaliya 2 garaam. Ugu dambeyntii, ma maalinta toddobaad qaadan Kratom kasta oo si buuxda u naftaada baradyaadl isticmaalka opiat.
Cabirka qiyaasta budada: Sida ugu wanaagsan ee lagu cabiro budo Kratom aad la electronic miisaankoodu baaxad. Haddii aad qabto baaxadda jikada ah guriga in uu leeyahay sax ah ugu yaraan 100 mg, tani waa in ku filan si loo qiyaaso baxay qiyaasta aad la doonaysaan,. Xuubab u Kuwani waa raqiis iyo waxa laga iibsan karaa dukaamada ama online for agagaarka $10 – $20. Xuubab u yar sax ah loo isticmaali karaa, laakiin mar walba maqli dhawe dhinaca hoose ee kala duwan qiyaasta ammaan ah si looga fogaado in badan qaadato. "Eyeballing" guud ahaan waa fikrad xun sida ay keeni kartaa inay dawadu ka badato iyo waxyeelo aan fiicneyn sida raaxo caloosha, lallabo, matag, xanaaq ama daal.
Sidee Kaabsuullada badan oo ah in la Qaado?
Dadka qaar waxaa laga yaabaa in door bidaan in iibsato kaabsoosha Kratom halkii budada qayb weyn ama caleemo burburiyo si loo badbaadiyo waqtiga iyo fogaado nidaamka of cabirista qiyaasood aad. Kaabsoosha intooda badan ku jiri doona inta u dhaxaysa 500 mg - 666 mg oo ah budada, inkastoo qaar ka mid ah "Jumbo" ama kaabsoosha "dheeri ah oo waaweyn" in lagu jaangooyo "00" ku jiri doona 1,000 mg oo ah budada. Hubi in macluumaadkan ka iibiya aad dooratay hesho si aad go'aan ka gaari kara qaadashada iyo go'aan ka gaaro inta kaabsoosha in ay qaataan ee tirada loo baahan yahay garaam. Xaaladaha qaarkood, qiyaasood laga yaabaa baahan 12 ama kaabsoosha dheeraad ah oo ay kiiska waxa macno fog dheeraad ah si loo gadashada doodii halkii.
Cabirka Kratom budada ah ee qaado
Haddii aadan haysan miisaan in miisaankiisu yahay tirada dhabta ah ee garaam, qiyaaso budo Kratom by qaado waa hab kale oo caadi ah. Full A, macalgadda heerka ku jiri doona qiyaastii 4.5 garaam oo ah budada Kratom. Xusuusnow in habka cabbirka tani ma ay noqon gebi saxda ah tan iyo waxyaabaha booraha kala duwan ku kala duwanaan karaan ay fineness oo marka la eego sida fiican ee-soo buuxiyey oo ah budada yahay. Tani waa sababta aad kor yimaado iyada oo tirooyin yar ka duwan haddii aad online raadiyo tiro ee garaam Kratom per macalgadda. (Qaado A waa saddex jeer mugga ee shaaha oo u noqonayso 13.5 garaam oo aad uga wayn ee qiyaasta ah ee dadka intooda badan, sidaa darteed waa in aad ku eekaan isticmaalaya shaaha oo kaliya.)
Bilowga ah iyo kuwa kale ee isticmaala heerka dulqaadka yar yahay, hal qaado inta badan waa ku filan si ay u helaan tamar iyo niyadda ku gareeceen Saamaynta caleen Kratom. Haddii aad qabto heer dulqaadka sare ama aad doonayso aragnimo Kratom more mellow, waxaa caadi ah in la isticmaalo inta u dhaxaysa hal iyo badh ilaa laba qaado maalin kasta. Dadka qaarkood waxay dooran karaan in ay isticmaalaan saddex ama in ka badan in ay "ka heli sare", laakiin haddii aan ku talinaynaa sida ay kordhin karaan fidista dhibaalka dhanka kale iyo sababa calaamadaha dulqaad ama ka baxaan. Ugu badnaan A ammaan qiyaasta budada bulk Kratom halkii maalin noqon doono 9 garaam ama ka yar oo isticmaalaya in ka badan inta aanay tani waxay hagaajin doontaa waayo-aragnimo mustaqbalka fog.
Just u maleeyay in aan ka tago lahaa a comment halkan, sababtoo ah hadda aan miisaan qudhaydu (NOTE2SELF: iibsan miisaan), macluumaad qiyaasta this, waxaan helay, waa ugu sax ah. In ku cusub Kratom, Waan baadhi tilmaamaha qiyaasta, waxaanay degeen dhinaca 7-9g halkan ku qoran, 1g = 1ml, ml sida aan ka arki on malqacadaha qiyaaso aan jikada ee (ma qaaddo miiska for dalagga a), 1tsp = 5ml, 5ml = 5G (qallafsan, sida tallaabooyin ml mugga, iyo garaam oo miisaan) of Kratom welwelka & xanuun. Waayo, Kratom ah budada ah, in kastoo aan maalgelin doonaa in miisaan maxaa yeelay, waxay ku xiran tahay fineness ee budada, oo dhan malqacadaha qiyaaso wax yar ku kala duwan yihiin waxaa laga yaabaa in, sida kor ku xusan. Anyways, Baadida ah dhankiisa digniin ay sabab u tahay sheegashada lallabo ama madax xanuun ka badan qaadato, isagoo intaa ku daray inay Fidmo & Baadi / ammaanka Combo marka hore waa habka ugu fiican si ay u bilaabaan. Sidaas daraaddeed waxaan ka helay aan 1tsp, ma waxaa sidoo kale si fiican u santuuq (marka hore ammaanka), oo waxay ku reebtay gal unugyada khafiif ah, diyaar u ah inay u rogrogmadaan & maydhaa kafan jidka in la kafeega u kulul yihiin sida in aan ka heli budada oo dhan afkayga sababta oo ah dhadhan qadhaadh ayaan maqlay oo ku saabsan. Laakiin…waxa u muuqatay badan, sidaa darteed waxaan ku guuleystay qadar wanaagsan, rogrogto, dhaqday, sugay. habeenkaas way yeeleen xanuun qaar ka mid ah qaado oo anna waan dhintay degdeg ah iyo xitaa dhintay oo la seexday habeenkii oo ahaa cajiib, maxaa yeelay marna aan seexan wanaagsan. Ma aan helin wax halhays opiat-sida, oo aan galin hore baan u eegay sida aan ahay addict a soo kabsaday. *Anigu garan maayo sida Kratom saameeyaa habka withdrawl markii aan hadda ma caadaysatay ah * Waxaan ahaa, Si kastaba ha ahaatee, iyo aniga ayaa wali xiiseynaya maxaa yeelay, haddii ay iska jamasho aan qaadan lahaa (maxkamad & baadi). Sheekada dheer dheer, budo Kratom ayaan qaaday (Premium Bali a) soo baxday agagaarka 7g ahaa qiyaas wanaagsan nasashada. Markii ugu anna waxaan soo qaaday meel u dhow 7g, Waxaan dhab u aragto. Waxaa yareeyo xanuunka iyo ima siin dareen opiat-sida yar. Waxa aan ahaa mid aad u badan sida aan thought..and lahaa in sida 'il-balling’ heli kartaa qof dhibaato qaar ka mid ah…Waxaan jidka hoos qiyaasay markii ugu horeysay (malaha qaaday 1 / 4tsp – yaa ka khayr badan jiran in kastoo). Sidaas daraaddeed waxaan yeelan doonaan in ay soo iibsadaan miisaan, laakiin ilaa markaas, Waxaan ku talineynaa dusin xeerarka qiyaasta kuwan, weheliso aan ammaan ugu horeysay / maxkamad & habka baadi – haddii oo kaliya sababtoo Kratom kala duwan ka distributors kala duwan ku kala duwan yihiin waxaa laga yaabaa in awoodba.
fikirka Final: Intaan ayaa laga yaabaa in la raadinaya a “sharci sare” marka hore, xaqiiqda ah in Bali Premium ee Kratom waxaan soo qaatay sameeyey nafiso aan xanuun joogto ah waa in ku filan ii si ay u eegaan in ay a user waqti dheer – sida loo baahan yahay oo kaliya, inkasta oo, maxaa yeelay, waan maqli dulqaad si deg deg ah ku dhisan iyo ma doonayaan in ay burburisay awoodda ay leedahay in ka badan oo aan xanuun jireed oo opiates ciday ku sii. Sida Borneo White Vein ku Kratom, Waxaan weli leeyihiin in ay isku dayaan, run ahaantii, waayo, cidhiidhi iyo maskaxda iyo murugo qoto dheer taas oo horseedaysa ii lahayn tamar ama focus (ama rajo, run ahaantii), laakiin gudbin doonaa in buugan markii aan wax badan ka baratid sida Kratom jidhkayga saameeyaa gaar ahaan. Rajaynaynaa in this ka caawisaa qof!
Incase ninna weli idiin sheegay, ratio = 1mg 1ml diinta waa biyo. Budada Kratom leeyahay cufnaanta aad u kala duwan, si diinta ka this mar dambe codsan lahaa. Waayo, tixraaca shaaha 5ml oo ah budada kookaha a Culustahay agagaarka 2.7g, sidaa darteed waa matalaad badan oo sax ah ee kratom badan biyaha noqon lahaa.
JK oo PA
Waxaan ognahay in ay tani waa post duug ah, laakiin u weli dareemaan in loo baahan yahay in la yidhaahdo wax halkan. Mid ka mid ah in la xanuunsan-talinayaa lahaa in si cilmiyeysan hadlo haddii mid aan la tababaray sayniska. Marka aad odhan 1mg in = 1mL biyaha, aadan run ahaantii saxda ah. milliigram A waa unug oo ah qiyaas waayo mass (MA CULAYS – mass tiryey xaddiga arrinta in muunad), iyo mililitir waa unug oo ah qiyaas for mugga (xaddiga meel bannaan oo qaaday by arrinta in muunad). Sinay mass in mugga waa sida is barbar tufaax si liin. The “1mg = 1mL trick” kaliya ka shaqeeya on Earth heerka badda by qeexidda. trick Tha loo isticmaali karaa si caddaalad ah loogu kalsoonaan karo in la qiyaaso mass haddii aad leedahay mugga la yaqaan oo ay leeyihiin qiimo qiyaas waayo, cufnaanta ee budada, laakiin ma aha sinnaan dhab ah. Marka aad la hadasho oo ku saabsan kala duwanaanshaha ee mass (aan miisaan) in garaam oo 5mL oo biyo ah oo ay kasoo horjeeddo mug isku mid ah oo biyo ah, aad si dhab ah is barbar degsiimooyin ay. Users talo siinta dadka kale ee ma aha wax xun, laakiin waa in mid ka mid hadli ku saabsan mawduucyo gudahood mawduuca isticmaalka daroogada kaliya oo ku saabsan taas oo ka mid ah waa aqoon. user kasta oo uma baahna in ay farmashiyaha a, laakiinse garta chemistry ee daawooyinka u muuqataa in dadaalka aad u wax ku ool ah. A user iyo sidoo kale-xog badan tahay waa user a ammaan.
hi. Waxaan la isticmaalayo kratom sannadkii la soo dhaafay – inta badan 1 kala duwan kuwaas oo i iibsaday kilo ah 150 ka amazon. waa “Maeng Da Supergrade” oo waxaan dareemi saameynta inay ka yar tahay 1g. xitaa ka yar .5g. aan 3g dulqaad waa ugu aan si raaxo leh ugu adkaysan karaa. Iyada oo dulqaad yar (marna isticmaalo in ka badan 3 maalmood usbuucii iyo hooba leh toddobaadkii dhif) awoodaan in ay qaataan waxaan ahay 4- 6 halkaas oo ka dib markii aan heli lahaa naseus oo dhan. Waxaan la yaabanahay sida kratom tani waxay noqon kartaa si awood ka fiirsaneysa qiimaha hoose iyo astaanta ah “maro jilicsan naf” calaamad. Waxaan u maleynayaa in ay kratom xoogan, lakiin i la yaabanahay haddii la enhaned wax kale oo aan ahayn kratom. Malaha kaliya qof xasaasi ah (ahay in walxaha ugu – i Iskuma wada cabbi kartaan sida badan 3 qamri aan la khasaariyey hubaal ..155 5'9 lab)..sidaasi darteed waxaan qiyaasi tani waa ammaan ah oo aan adulterated la walax kasta oo kale oo … fikirrada? … Thanks oo dhan
Ma laga soosaaray ama budo ah oo joogto ah? Qeybaha waxaa la si iyaga ka dhigaa inay xoog iyo waxaa badanaa muujinaysaa sida isagoo 10x ama 15x xoog taas oo ah sababta qiyaasta ka yar keeni lahaa saamaynta awood badan.
Lydon baad shakhsi ahaan u isticmaali kratom ama ka hor leeyihiin? Dabcan uma baahnid in aad in aad ka jawaabto laakiin waxaan ahay cajiib ah sababtoo ah waxaad u muuqdaan in ay ka heleen xaddi badan oo aqoon, waxaa ka
Amazon iibiyo?! Ama waxay ku beddeleen ay siyaasad ama, ma ay joogaan UK. Ma aha in aan ku aamini lahaa amazon faahfaahinta arrintan la xiriira my, laakiin waxaa laga yaabaa in aan weydiin waxa la eego aad loo isticmaalaa in lagu raadin, waayo,, iyo waxa dalka aad ku sugan tahay? Waxaan ahay cajiib ah.
3 tramadol bilood ka hor i la siiyey for qiyaasta pain.my dib ahaa 200mg.i u suurtagashay in ay hoos u gabogabaysmo 100mg oo qaaday 3 todobaad si kastaba ha ahaatee soo bixid ah ayaa la wadista ii waalan iyo cillad !!!i iyocadhadii aaminsan evn aan 100mg casiraad iyo zaps maskaxda ahaayeen wax walba horrific.i qaaday ka iburofen in paracetamol ay ahaayeen useless.Anyway i soo gaarto da maeng kratom iyo tan im shalay si diirsaday ugu dambeyntii i dareemayaa aadanaha ah mar iyo im dhab yaabay waxaa i helay habeenkii oo dhan wax calmly.the la soo dhaafay waxaan rabaa waa in ay leeyihiin in ay ku tiirsanaadaan da maeng shir tagi doonto at 2G 7hours kasta oo ay shaqeeyeen wanaagsan inta ay qaadan doonto in gabogabaysmo of.and waa this aad u badan?
Waxaa lagu tilmaamay sida “fasalka super budada Maeng da caleen” oo aan cilmi-qiimo aad u hooseeya ee ahaa $140 waayo, 2.2lb (1 kilo). Aniga ayaa saas ku badan tahay qaaday 100 jeer laakiin saamaynta Joogaan <1g hubaal oo waxay igu saabsan in ay la adulterated laga yaabaa in wax kale… Waxaan akhriyey dun on ururka kratom soo jeedinaya qof kale u maleeyay in ay ahayd wax yar oo aan caadi ahayn ee dhadhanka iyo saamaynta ugu qiyaasta hooseeyo . Time si aad u hesho iibiya ammaan ah.
Waxaan ugu dambeyntii dabamariyay my cherry Kratom oo bilaabay isticmaalka sheyga this. Waxaan bilaabay in aan la qiyaas yar oo Maeng Da iyo dareemay saameynta no. Maalinta ku xigta waxaan isku dayay shaaha heer kaas oo sidoo kale ii hadhay saamaynta no a. Maanta waxaan baabbi'iyey 2 qaado heerka wax soo saarka iyo dareemay kor u kiciya yar iyo dareen yar oo koror niyadda. Tani waxay u muuqataa in ay dose weyn ii. Waxaan ahaa on norcos iyo tramadols xanuunka ugu dambeeyey 4 sano iyo hadda ahay on cunto carb free ah (Waxaan hadda ahay 270 pounds). Sidaas waxaa waxaan la yaabanahay hadii mid ka mid ah xaaladahan waa ay sii kordheysa aan marinkii oo waayo aragnimo ah Kratom ah. Waxaan si daacad ah rabto in aad hesho off dawooyinka iyo isticmaasho walax in uu yahay dabiici ah xanuunka iyo si loo yareeyo murugada. Qofna ma leeyihiin wax macluumaad ah ama talo ii waqtigan?? ku hayaa jawaab.
Weligaa ma loo isticmaali kratom naftaada Lyndon ama samaysay cilmi baadhis ku dul? Waxaad u muuqdaan in ay leeyihiin wax badan oo aqoon oo aan laga yaabaa in su'aal ku saabsan
Dude aan aadka u shakiday waxay ahayd adulterated. Waxa ay noqon doontaa qaali DHEERAAD AH, ma YAR. fasalka Super loola jeedaa oo keliya ay isticmaalaan leafs ugu weyn ballaaran ugu waaweyn si ay u helaan content sare dhimirka iyo Maeng Da loo yaqaan cadaadis ugu qatarsan si aad u badan tahay oo kaliya heshay heshiis aad u wanaagsan oo waa sensetive in saamaynta. Noqo farxad iyo ma sida aan ku sameeyey caayaane. Hadda waxaan haystaa inuu qaato si uu u dareemo caadi ah, laakiin aan helin wax saameyn possitive ka.
Waxaan dareemayaa saamaynta ceelka hoos 1 garaam ee non-Maeng-da kratom, sida this cas Borneo fiican in uu hadda ii jirrabaya.
Waxaan ahay yaabeen: Waxaan googled oo aan ka helay dad badan oo run ahaantii ay qaataan kratum xanuunka joogtada ah. Waxaan lahaa on Darvecet sanado badan ilaa maalintii la jiido off suuqa. Markaas aan dr lahaa inaad i beddelato hydrocodone ah oo aanan dhab ahaan doonayaan laakiin lahaa doorasho lahayn. Waxaan leeyahay tacsida ee dhabarta aan hoose iyo ilaa aan Carruurta si miisaan suurad aan dr oofin dib qaliin (Waxaan dhawaan laga badiyay 42 lbs iyo aniga ayaa wali laga badiyay) wakhtiga celceliska, my 6 xadka pill maalin ma aha arrin ku filan aan chronic xanuun-8 shaqeeya kaamil ah sida aan ka soo toosin dhexe ee habeenkii u baahan caafimaad Aan ku. Waxaan la qaaday 6-8 maalintii ku saabsan 6 sano (Si kastaba ha ahaatee dheer Darvecet ayaa off suuqa) waxa kaliya helo xanuun-Ma heli sare-waligii qaataan ka badan 1 1/2 si ay u 2 mar. Nasiib darro dhawaan dhan sharciyada loo nuujiyo cusub oo ku saabsan caafimaad Aan xanuun in khiyaar ah ma aha. Waxaan aakhirka qulqulaya todobaad ka hor aan Midab -all waxaan wantmis xanuun joojiye! Ma doonayaa heli sare (laakiin ma halmaantay doonaa wax kasta oo ogolaanaya i si ay u dareemaan wax kasta) sidaa darteed-i cilmi online xanuunka dhirta sharci iyo waxaa ii horseeday in kratum. Waxa aan rabaa in aan ogaado waa nooca ugu fiican ee xanuunka? Waxaan ognahay inay jiraan nooc oo kala duwan halkaas, sidaa darteed haddii qof ayaa isku dayay xanuunka aan xiiseyn lahaa si aad u hesho ra'yi-celin-mahadsanidiin!
Daacadii, i reccomend lahaa Thailand cas, tht waxa i inaan la isticmaalayo waayo, murqo waxaan ka heli in aan dib. waa nooc nasto, iyo xanuunka sare qarribma, maeng Green / Bali waa ay dardar niyadda tamar badan.
hi qof walba,
cusayb baan ka ahay in Kratom, oo kaliya iibsaday premium Thailand xididka cas. Ujeedada koowaad waa in uu yareeyo walbahaarka, walaaca, iyo si ay u caawiyaan i seexan habeenkii. Currently, habeen walbana waxaan khamri cabbaan, laakiin dhab ahaan doonayaan in ay joojiyaan inay sameeyaan in. Shaqadeyda waa walaac aad u sarreeya, sidaas darteed waxaan u baahan tahay wax. Anyway, Anigu ma ihi qof dumar ah oo weyn, ku saabsan 5'5″ at 130 pds. Intee in le'eg oo waa in aan bilaabo? Waxaan leeyahay budo aan caleemaha. Sidoo kale, markii aan qaadan lahaa haddii aan doonayo in aan ku dhici hurda by 9:30 ama 10:00? Waxaan maqley in aad ka heli karto saamayn ka soo horjeeda, oo aad u jihaysan iyo hyper. Taasi waa waxa aan doonayaa in aan ka fogaado. Waad ku mahadsan tahay wax talo ah.
Waxaan soo maray ku saabsan 3oz of kratom ka calibotanicals. 1.5tsp – 2.5tsp u muuqataa in ay dose aan ku faraxsan. Wax ku ool ah ka qaada xanuunka ee aan dib u ah oo kuu ogolaanaya igu soo noqda shaqada jirka hesho aragti wanaagsan. i siinayaa qaar ka mid ah dugaal ee xanuun joojiye Pharma aan suuxintii saarka-yeesho hurdeysan. 2.5tsp + i siiyey qaar ka mid ah lalabo taas oo ah in ka badan hal mar ayaan Yak. Inta badan fadilay acetaminophen ku dareen buka pervasive loo isticmaalaa in jaakad calooshaydu la.
Waa maxay dhaawac ayaa aad iibsiga iyaga ka?
Waxaad leedahay i xiiseynaya.
Waxaan dhawaan maqlay Kratom oo isku dayaya inaan sameeyo cilmi-baaris badan dhamaystiran sida ugu macquulsan ka hor iibsiga ama gubaya Kratom.
Anigu waxaan raadinaya bedelka maandooriyaha xanuunka joogtada ah, walaaca iyo diiqadda aan dhiirrigelin ku AMA saamaynta ku dejinaysaa xad-dhaaf ah. Saamaynta fudud iyo baashaal u noqon lahaa mid la aqbali karo.
saamaynta madadaalo UMA la aqbali karo!
Waxaan sidoo kale raadinaya isdhexgalka u dhexeeya daroogada KASTA iyo ALL qoray iyo Kratom..
Waxaan jecelahay-celin on arimahan.
Qof kasta oo ka duwan sameynayso la walax this, si aad u taxaddaraan. Ka bilow yar yahay si aad u qiimayso dulqaad. Waxaan sameeyey oo ku saabsan 1/4 ee shaaha oo ah in waxba. saaxiibada A gargaartaan isku day qaado. Waxaan isku dayay in maalin oo kala duwan oo aan ugu dhakhsaha badan dareemay heegan iyo diyaar u tahay inay u tagto ororodid. Waxaan soo jeeday. Si kastaba ha ahaatee, maalin maalmaha ka mid ayaan isku dayay saddex qaado si simanyihiin qaado iyo in ugu dhakhsaha badan iga dhigay Fight tegey on saacado, si taxaddar inta aad isticmaali. Hadda waxaan kaliya dusin la shaaha iyo wax kale. Dabcan qof walba ay sameynayso kala duwan, laakiin ka digay kasta si aadan la kulmaan wixii aan ku sameeyey.
Fadlan la saxo my email in Sharonsbr@aol.com. Thnaks
Haddii aad tahay qof user xanuun-kiniin, laakiin waxa ay doonayaan in ay helaan iyaga oo ah, ka dibna mid ka mid qaado oo qabadi wanaagsan oo ah budada kratom waa meesha ugu fiican si ay u bilaabaan. Taasi qiyaas ahaan 4-6 garaam, xaq halkaas. Waxaan isticmaali qaaddo caag ah caddaan - sida waxa makhaayadaha Chinese bixin. Oo aan la hadlayo "dhejiya ', sida in: daataan-haddii-you're-ma-joogta qabadi.
Qaar badan oo sheegaya in Bali kratom waa nooca ugu fiican ee soo socda off xanuun-kiniinka, laakiin si daacad ah ma jiro farqi weyn oo u dhexeeya nooc kratom. Waxay tahay oo dhan ankii; oo dhan ay bixiyaan shahaadada macquul ah xanuun joojiyaha. Ugu dambayn, sharaxaada sida "stimulanting" vs. "Sedating" waa wax yar oo marin habaabin ah. E,g,, Bali aadan ay reebi doono, iyo Maeng Da haysan doonaa inaad kedis ah derbiyada! oo dhan ay tahay oo ku saabsan isku mid: dhammaan nooc kratom siin halka waxtar leh 'heegan' tayo leh, waqti isku mid ah, meel dhexaad ah oo aad dejineysaa, maskax.
Mid ka mid ah wax aad muhiim u ah: haddii aad dagaal bixitaanka opiat, aad u baahan doontaa in dib-u-dose kratom kasta 3-4 saacadood. Ama haddii kale w.d ah. calaamado jebin doonaa dib u marayo. Si kastaba ha ahaatee, haddii aan si firfircoon uga qabatinka opiat ka dibna hal qiyaas wanaagsan oo kratom subaxdii kartaan oo keliya ku saabsan ee la soo dhaafay oo dhan maalin, oo aan u degto xoog leh dib-u-dose.
Kratom waa waayo-aragnimo ka mid-ah-a-nooc – macno ahaan waa angellic, weli waa inuusan marna aad ka dhigaysa wacked-out ama gebi ahaanba sarkhaansan.
Sidaas for dareen ankii waxaan u baahan tahay in ay qaataan kor of 10 kaabsoosha? Taasi waxay u muuqataa sida badan oo wax la qaadan. Waxaan ku wareegsan ahay 200 lbs of flab.
Waxaan ahay shan cagta toban qof dumar ah oo jira da'da dhexe kuwaas oo culeyskiisu yahay 168 pounds (sida hadda.) Waxaan kratom saddex ama afar jeer qaaday hadda. On my munaasabadda ugu horeysay waxaa i dareensiisay aad trancey oo kullan soo baxay (Waxaan u badan tahay qaaday oo aad u badan, waayo, qiyaasta koowaad – waxaa lagu talinayaa in labadii loox, runtii waa in ay bilaabeen off iyadoo mid ka mid ah.) Ma dhahayo waxa ay ahayd dareen xun – dhab ahaan, waxa uu ahaa mid aad u wanaagsan. Laakiin waxa aan ahaa waxa aan filayaa, sidaas Anigu ma aan mar kale sameeyo. Taasi waxay ahayd sannadkii la soo dhaafay.
Habeenka ka hor la soo dhaafay aan ka cabanaya hurdo la'aan laga cabsado, iyo quus qaaday labadii loox. ku filan ii dabacsan oo aan la seexday habeenkii oo toosisay faraxsan (waayo, mar) iyo nasiyey. In muddo ah ayaa la aan ku dul socda iyada oo subaxdii aan la yaaban sababta aan dareemay aad uga wanaagsan sidii caadiga ahayd – ka dibna waxay xusuusteen in Waxaan u qalmay qaaday kratom halkii kiniiniyada hurdada. Sidaas, Waxaan ka mid ah qaaday si ay u arkaan sida ay u baxay. tegey wanaagsan – waxaa u fikirayaa si cad, tabar buuxda. Later waxaan hubiyaa waxa lahaa waxaan amar ku bixiyay in hore 2015 oo ogaaday in aan qaar ka mid ah baakad muunad. Like Wally baan 'guestimated’ oo wuxuu lahaa swig leh qaar ka mid ah cabitaanka liinta. Qaadeen on aan maalin fikirka 'iyo sidoo kale, in uu ahaa crock a. Miyaanan ka shaqeeya oo dhan.’ wax Next waan ogahay inaan fadhiga ka gabi ahaanba boneless inaan fadhiya, umana hurdaysna, weli aad ugu faraxsan laakiin sabayn. Oo waxaan laga yaabaa in ay u badan tahay ayaa kacay oo socday haddii aan lahaa lahaa in, laakiin waxaan arki karin hadda fikiraan sababta aan abid doonayo inuu mar kale u guurto.
Hadda, halka in badan oo xiiso leh (inkastoo lalabo ah, xataa) ma aha waayo-aragnimo ah waxaan jeclaan lahaa inuu ku soo celiyo. mustaqbalka waxaan maayo "bu'da’ waxaa. Waxaan leeyahay go'an oo malqacadaha, Kuliyadda. Sidaas, inta aan qaadan waa inaad i sii heegan inta lagu jiro maalinta? Iyo in aan mar naftayda qiyaasta oo aroortii ah iyo ka tago, ama haddii ay bilowdo inay way libdhi off ahay waxaan ammaan ay ku soo celiyaan qiyaasta – asal ahaan inta jeer ee waa in aan ku qaadan?
Waan ka xumahay in ay Tog. Waxaan dhihi karaa in ilaa iyo haatan aan natiijooyin isku qasan lahaa, laakiin waxaan qabaa haddii aan ka heli karaa barta macaan waxaan noqon doonaa kuwo ku faraxsan yahay la. waxaa Qaadashada waayo, hurdo la'aan, jabka iyo xanuun joogto ah. Sidoo kale si ay u caawiyaan i yareeyo dependancy khamriga. Waxaa caawiyo xanuunka aad, oo maanta waxaan ma Tuttosport khamriga. Waxaan laga yaabaa inuu ku qaadan berri in kastoo.
Waxaan u baahanahay info oo dhan ayaan ka heli karaa on kratom